150 taona amin’ny taona 2021 ny nidiran’ny finoana katolika teto Fianarantsoa - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Folo andro monja ny faharetan’ny dia. Nigadona teto Fianarantsoa, Ivone fahizay, i Mompera Marc Finaz, Pretra zezoita, ny taona 1871. Niara-dalana taminy ny mpino Katolika mpanao varo-mandeha avy any Antananarivo. Nandalo tao Befeta ry zareo ka nanao Batemy olona roa sahady. Tonga tao Ambalataratasy izy ireo ny 5 oktobra 1871. Nijanona tao aloha, niandry ny fahazoan-dalana avy amin’ny Governora, ahafahana miditra ny tananan’i Fianarantsoa. Fianakaviana kristianina katolika avy any Antananarivo efa niorim-ponenana teto no mpampiantrano. Isan’izany ny fianakavian-dRatsimba Piera. Lasa mpampianatra sy mpitarika ny finoana katolika taty Fianarantsoa, niaraka tamin’i Mompera Finaz, izy mivady ireo. Ny 14 oktobra 1871, lamesa voalohany ampahibemaso notarihin’i Mompera Finaz teto Fianarantsoa. Nandravaka ny trano nivavahana ny sarin’i Masina Maria sy ny Fo Masin’i Jesoa. Nandaitra ny fampianarany ka tsy mahagaga raha manana fitiavana manokana an’i Masina Maria ny eto Fianarantsoa.
Nanomboka nitady toerana hanorenana fiangonana amin’izay i Mompera. Ambozontany, izay fasana tamin’izany fotoana izany, no toerana nokendreny. Tsy neken’ny Governora ny fangatahana. Nalahelo i Mompera ka nanankina tamin’i Masina Maria ny fangatahany tamin’ny alalan’ny fanaovana vavaka hasivian’andro niaraka tamin’ny Kristianina. Nokendrena tsara hifarana ny 8 desambra ny vavaka. Ny ampitson’io, ny 9 desambra 1871, nidina avy any anaty Rova ny Governora sy ny mpanotrona azy mba hifampidinika amin’i Mompera. Nasainy nitady toerana hafa i Mompera. Diso fanantenana fanindroany izy ka nody tamin’alahelo sady nitaraina tamin’i Masina Maria hoe :“Fa maninona no dia nandiso fanantenana toy izao ianao ry Neny”. Araka ny voarakitra ao amin’ny boky fahazato taonan’ny diosezy, nosoratan’i Mompera Jean Baptiste de la Sales. Fotoana fohy taorian’izany, nihazakazaka nihazo an’Ambozontany ny iraky ny Governora. Nampiantsoina haingana i Mompera ka niverina. Nilaza ny mpitondra teny avy any anaty Rova fa omena an’i Mompera indray ny tany nangatahiny. Mazava araka izany fa vokatry ny fahatokisana be dia be an’i Masina Maria ny nanombohan’ny finoana teto Fianarantsoa.
Telo taona nisesy izay, nanao dia mivavaka na pelerinazy ny Diosezy ho fanomanana ny fankalazana ny jobily. Koa ny taona 2018 nibanjinana manokana an’i Masina Maria. Vanim-potoana lehibe nifanojo tamin’izany ny tsingerin-taona maromaro teto amin’ny Diosezy izay saika miankina tamin’i Masina Maria avokoa. Teo ny fankalazana ny faha 60 taona ny fitsofan-drano ny Monasiteran’ny Karmelita Ankidona. Nampian’ny jobily diamondran’ny Monasiteran’i Masina Maria Sistersianina, eny Maromby. Fahatelo farany fahatsiarovana ny nanorenana ny horim-bato lehiben’i Masina Maria eo Kianjasoa. Taonan’i Md Jozefa kosa ny 2019 ka nankalazana ny faha 30 taonan’ny namangian’ny Papa Joany Paoly Faharoa an’i Fianarantsoa, ny 1 mey 1989, fetin’i Md Jozefa Mpiasa. Noraisina ho ezaka nandritra ny taona ny fehin-kevitra nalaina tamin’ny fampianarana nataony dia ny fanomanana tsara ny tokantrano sy ny fampianarana asa. Raha vita ny fitodihana manokana tamin’i Masina Maria sy i Md Josefa, mitodika manokana amin’i Jesoa Zaza tinaiza indray amin’ity taona 2020 ity. Foto-kevitra nitondrana ny taratasy pastoraly ny Fanabeazana, miaraka amin’ny teny faneva voizina amin’izao fotoana izao manao hoe: “Ny zaza no tsara taiza, ny ray aman-dreny no miatrika adidy”. Izany hoe : raha sanatria ka ratsy taiza ny zaza, tsy nandray andraikitra izay ny ray aman-dreniny. Betsaka ny tanora mandray ny Sakramentan’ny Fankaherezana isan-taona. Miditra amin’ny fiainan’ny fahatanorana, nefa maro amin’izy ireo no tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Atao ezaka any amin’ny Ankohonam-piangonana Fototra (A.P.F) ny fampianarana mamaky teny sy manoratra. Na dia teo aza ny covid-19, teo mandrakariva koa ny Radio TSIRY niara-dia tamin’ny kristianina manohy ny pelerinazy. Alao hery, tohizo ny diantsika.